नेपालको नाम फेरी गुञ्जियो, प्रिन्स दाहाल जुनियर ब्याडमिन्टनको विश्व नम्बर एक मा पुगे
गृहपृष्ठ » खेलकुद » नेपालको नाम फेरी गुञ्जियो, प्रिन्स दाहाल जुनियर ब्याडमिन्टनको विश्व नम्बर एक मा पुगे
बिहिबार २९ पुस, २०७८
काठमाडौं । खेलबाट नेपालको नाम फेरी गुञ्जिएको छ । ब्याडमिन्टनमा इतिहास रचेर नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फको बरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएसँगै विश्वभर नेपालको नाम गुञ्जिएको छ ।
विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले जारी गरेको पुरुष जुनियरतर्फको बरियताअनुसार १९ वर्षीय दाहाल पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । उनको १० हजार पाँच सय अंक रहेको छ ।
महासंघले जारी गरेको बरियताअनुसार जुनियरतर्फ दोस्रो बरियतामा मलेसियाका जस्टिन होह छन् । उनको नौ हजार पाँच सय ९० अंक रहेको छ ।
यस्तै मलेसियाकै फाजरिक मोहमद रजिफ छ हजार नौ सय २५ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छन् । फ्रान्सका एलेक्स लानिर छ हजार सात सय अंकका साथ चौथो तथा भारतका एस शंकर मुथुसामी सुब्रमन्यम छ हजार ३४० अकंसहित पाँचौँ स्थानमा छन्।
विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फ शीर्ष खेलाडी बनेपछि दाहालले रासससित कुरा गर्दै आफ्नो सपना पूरा भएको बताए ।
उनले आफू विश्वकै एक नम्बर खेलाडी बन्ने उद्देश्यका साथ खेल्दै आएको र त्यो पूरा हुँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताए । अबको ध्यान बरियतालाई कायमै राख्नतर्फ रहने भन्दै दाहालले भविष्यमा सिनियर ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा समेत प्रदर्शन राम्रो गर्दै जाने बताए ।
नेपालमा प्रतियोगिताको अभाव तथा राम्रो प्रशिक्षण पाउन मुश्किल भएको दाहालको गुनासो छ । राज्यले खेलाडीका लागि उचित वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि प्रतियोगिता र प्रशिक्षणबाट वञ्चित रहनुपरेको दाहाल बताउनुहुन्छ । पाँच वर्षको उमेरमै दार्चुलाबाट ब्याडमिन्टन खेल्न थालेका दाहाल हाल काठमाडौंमै अध्ययनरत छन्।
नेपालका जुनियर खेलाडी दाहालले पाएको यो नै नेपाली ब्याडमिन्टनले हालसम्म पाएको सर्वाधिक ठूलो सफलता हो । व्यक्तिगत तथा देशकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि भएको दाहालका मामा एवं व्यवस्थापक कमलेश निरौलाको ठम्याइ छ ।
ब्याडमिन्टन प्रशिक्षक जयन्त श्रेष्ठले दाहालको सफलताले अन्य नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई हौसला मिलेको बताउनुभयो । दाहालको सफलताले नेपालको समग्र खेल जगत्लाई नै उत्साहित बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दाहाल हालसम्म कुनै पनि विभागिय क्लबमा आबद्ध छैनन् । उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नै ब्याडमिन्टन खेल्दै आएका छन् । २०७६ मङ्सिरमा जारी विश्व बरियतामा दाहाल पहिलोपटक ३२औँ स्थानमा रहन सफल भएका थियो । त्यही वर्ष पुसमा जारी बरियतामा उनी १४औँ स्थानमा तथा पुस अन्तिम साताको बरियतामा दाहाल १०औँ स्थानमा उक्लिएको थियो ।
२०७६ चैतमा महासंघले जारी गरेको बरियतामा दाहाल सातौँ स्थान तथा गत वर्ष माघमा उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिन सफल भएको थियो ।
त्यतिबेला दाहालभन्दा अब्बल डेनमार्कका म्याड्स जोएल मुलर तथा भारतका वरुण कपुर थिए । मुलर शीर्ष स्थानमा तथा कपुर दोस्रो स्थानमा थिए । दुवै जना हाल सिनियर प्रतियोगिता खेल्दै आएकाछन् ।
विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले प्रत्येक साता विश्वभरका जुनियर तथा सिनियर खेलाडीको बरियता सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
यस्तै विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले जारी गरेको जारी गरेको महिला जुनियरतर्फको बरियताअनुसार नेपालकी महिला खेलाडी रसिला महर्जन १९औँ स्थानमा पर्न सफल भएकी छन् ।
इंग्लिस प्रिमियर लिग: सिटीलाई १३ अंकको अग्रता, चेल्सी पराजित
पल्सर क्रिकेट एक्सेलेन्स सेन्टर
नेपालकी पुष्पाले विभिन्न देश पछि पार्दै जितिन् कास्य पदक
कमल थापाले पार्टीको चुनाव हारे तर प्रतिष्ठित टेनिसमा उपाधि जिते
सरकारले महिला भलिबल खेलाडीलाई जनही पाँच लाख दिने
नेपालले उज्वेकिस्तानलाई हरायो
भारतलाई पाकिस्तानले शानदार तरिकाले हरायो
नेपाली महिला खेलाडीलेपनि विदेशमा राखे नाम, महिला टोलीको लगातार तेस्रो जित
नेपाली सेनाले आयोजना गरेको लन टेनिसका यी हुन् विजेताहरु [ सूचीसहित ]
कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई कारबाही, को हुन् नयाँ कप्तान ?
प्रधानसेनापति प्रथम राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिता सुरु, क्लव कति छन् ?
महासचिव गुटर्रेस बेइजिङ ओलम्पिकमा उपस्थित हुने
क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा दासानायके नियुक्त
इंग्लिस प्रिमियर लिग : लिभरपुलद्वारा एभर्टन पराजित, चेल्सी र म्यान्चेस्टर सिटी पनि विजयी
जब खेलाडीले पब्जीमा ७ अर्ब डलर खर्च गरे !
त्रिविद्धारा भर्खरै एकै पटक ४ वटा नतिजा प्रकाशित [ नतिजासहित ]